AMISOM oo weerartay meelo ay al-AShabaabku xoog ku lahaayeen oo Muqdisho ku yaal - Sabahionline.com
AMISOM oo weerartay meelo ay al-AShabaabku xoog ku lahaayeen oo Muqdisho ku yaal Maarso 02, 2012
Ciidamada AMISOM ayaa aroornimadii saaka Jimcadii (2-da March) weeraray meelo Muqdisho ku yaalla oo ay al-Shabaabku hore u haysteen, sida ay sheegeen saraakiihu. Qodobbo la xiriira
Ciidamada Soomaaliyeed oo al-Shabaab ka ciribtiraya Muqdisho
Al-Shabaab oo mamnuucay xoolaha laga iibiyo Kenya
Qabsashada Jowhar waxa ay naqaska ku sii xirtay al-Shabaab
Ciidamada Midowga Afrika ayaa sheegay in dadka rayidka ah ee ku noolaa degmada dhada waqooyiga-bari ee Muqdisho ay goobta isaga guureen ka hore aan halkaa lagu garaacin madaafiicda isla markaana ayan goobta galin taangiyada iyo ciidamada cagtu. "Waxaannu ku durugnay meelihii ugu dambeeyey ee ay ka joogeen degmada Suuqa Xoolaha innagoo baro muhiim ah kala wareegnay,” ayuu yiri taliye ciidan oo Soomaali ah oo la yiraahdo Cabdullaahi Cali Caanood. Xaafadda Suuqa Xoolaha ayaa ah meeshii ugu dambeysay ee Muqdisho ku taallay oo ay al-Shabaab awoodda ku lahaayeen, AFP ayaa werisay. "Hawlgalladu way soconayaan inta aannu haraadiga argaggixisada ee iminka sii firxanaya ka takhallusayno,” ayuu yiri Caanood. Weerarradani waxay argagixisada ka saari doonaan dulal muhiim u ah oo ay shacabka ka soo weerarari jireen,” ayuu yiri taliyaha AMISOM Major General Fred Mugisha oo war-murtiyeed soo saaray. Ma jeclaysatay maqaalkan?
saed Mohamed Ali
March 3, 2012 @ 10:40:07AM
Waa arrin aad u wanaagsan in xukuumaadda soomaliya ay qabsatay magaalooyin waawayn oo Alshabaab haysteen. Waxaan leenahay sii wada dagaalka ilaa iyo inta soomaaliya laga wada saarayo kooxdan argagixisada ah.